musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » New Beijing Exhibit Inoburitsa Hunhu Hwekutanga
Zviratidziro zvinenge mazana maviri zvakaratidzwa pachiratidziro, chakanzi Rice, Origin, Enlightenment: Special Exhibition yeShangshan Culture Archaeological Discoveries muZhejiang, kuratidza kukosha uye kukosha kwesangano rekurima mupunga rinomiririrwa neShangshan tsika kune budiriro yeChina, pamwe nerubatsiro rwayo kuEast Asia nepasirese.
Zviratidziro izvi zvaisanganisira tsanga yemupunga ine carbonized yakatanga makore 10,000 XNUMX apfuura, zvidimbu zvehari dzakapendwa, matombo eguyo nematombo emubhedha, pamwe chete nehari dzehari dzakanakisa nemakapu zvakafukunurwa. Vakaratidzira budiriro yemagariro, hupfumi, uye tsika apo kurima mupunga kuchangotanga, pamwe nemararamiro emisha yeChinese nekuita kugadzirwa kwevanhu mumazuva ekutanga.
Seminari pamusoro pebudiriro yeChina neZhejiang yakaitwawo kuNational Museum yeChina sechikamu chakakosha chekuratidzira. Yakabatanidzwa nevanochera matongo kubva kuChina uye kunze kwenyika. Nhaurirano dzakaitwa pamusoro pekukosha kwetsika yeShangshan munhoroondo nemazuva ano, pamwe chete nechinzvimbo chetsika muChinese nemagariro evanhu.
Pamusangano uyu, Purofesa Dorian Q Fuller kubva kuUniversity College London Institute of Archaeology akaunza, kubva mumaonero epasi rose, kukosha kwetsika yeShangshan uye mupiro wayo mukushandurwa kweNeolithic. Li Liu, purofesa paStanford Archaeology Center, Stanford University akatsanangura nezvetsika yeShangshan uye kwakabva waini yezviyo.
Iri pakati nepakati nepakati peRwizi rweYangtze kuChina, nzvimbo yeShangshan kusvika parizvino ndiyo yakasara inozivikanwa yekurima mupunga pasi rose. Semabviro ekurima mupunga, tsika yeShangshan inotora chinzvimbo chakakosha mukuumbwa kwebudiriro yeChina.